पेट दुख्यो ? किन दुख्छ पेट ? – MEDIA DARPAN
पेट दुख्यो ? किन दुख्छ पेट ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ११ भाद्र २०७६, बुधबार २०:२३
मानिसमा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरु मध्ये सबैभन्दा बढी देखिने समस्या हो पेटको समस्या । नेपालमा पनि सरकारले सूचिकृत गरेका प्रमुख १० रोगमध्ये पेट सम्वन्धी रोग जस्तै पेट दुख्ने, ग्यास्ट्राइटीस , झाडापखला, आउ जस्ता रोगहरु समेटिएका छन ।
चिकित्सा विज्ञानले साधारण मानिने झाडा–पखला देखी अत्यन्तै जटिल मानिने क्यान्सर रोगको उदगम स्थल पेटलाई नै मानेको छ । यद्धपी ती समस्याहरु पेटका पनि विभिन्न अंगमा देखिन सक्छन ।अनि पेट रोग एउटै मात्रै यस्तो रोग हो जो संसारका प्रत्येक मानिसले कुनै न कुनै बेला अनुभव गरेकै हुन्छ । चिकित्सकहरु भन्छन,‘विकसित होस या विकासोन्मुख मुलुक, धनी होस या गरीव, महिला होस या पुरुष, केटाकेटी होस या प्रौड ,बृद्ध सबैलाई पेटको रोगले सताएको हुन्छ । यो रोगले न कुनै क्षेत्र छुट्टयाएको हुन्छ , न कुनै वर्ग, लिङग र उमेर ।’
बरिष्ट पेटरोग विशेषज्ञ डा दीनेश श्रेष्ठ भन्छन, ‘पेट रोगमा समस्या पार्ने पानी र खाना हो । असुद्ध पानी र दुशित खानाकै माध्यमबाट शरीरमा व्याक्टेरिया तथा भाइरसहरुको प्रवेश हुन्छ । त्यसले नै पेटका विभिन्न अंगमा संक्रमण निम्त्याउछ । अन्तत पेट दुख्छ ।’ उनले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको जीवनशैली, उचीत सरसफाईको अभावका कारणबाट पनि पेट रोग हुने सम्भावना व्यक्त गरे ।
अर्का बरिष्ट पेटरोग विशेषज्ञ डा भूपेन्द्र कुमार बस्नेत भन्छन, दुषित पानी , बासी सडेगलेको खानेकुरा मात्रै होइन पेट रोगका लागि धुम्रपान र मध्यपान पनि कारक बन्न सक्छ ।’ उनले पेटको रोगलाई सामान्य रूपमा लिने बानीले पछिल्ला दिनमा पेटका क्यान्सर बिरामीसमेत बढ्दै गएका बताए ।
पेटभित्र जति अंग छ ती अंगहरुको नियमित सञ्चालन प्रकृयामा अवरोध भयो पेट दुख्छ । दाया-बाँया कोखा, नाइटोको वरपर तल वा माथि पेट दुखाईका केन्द्र मानिन्छ । तर यसका भित्री भागमा रहेका अंगमा हुने गडबडीले पेट दुख्ने गर्छ ।
ग्यास्ट्रोलोजिष्ट डा.श्रेष्ठ भन्छन, ‘पेट र यसभित्र रहका अङ्गहरूको सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै गढबडी वा अवरोध हुनासाथ पेटमा समस्या देखा पर्छन् । जसको लक्षण पेट दुखाइ, झाडापाखाला, डकार बाट देखिन्छ ।’
डाक्टर श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी आमाशय, पेङ्क्रियाज, गल्डब्लाडर (पित्तथैली), सानो आन्द्रा, ठूलो आन्द्रा र मृगौलाबाट जाने नली युरेटरमा गडबढ हुँदा पेट दुख्छ । जब पानी वा खानाका माध्यमबाट पेटमा पुगेका भाइरस वा ब्याक्टेरिया सजिलै पाचन प्रणालीमा घुल्छन् त्यसले नियमित प्रकृयालाई अवरोध सिर्जना गर्दछ । जब नियमित प्रक्रियामा असर पुग्छ मस्तिष्कले त्यसको तत्काल संकेत पाउछ र हामीमा दुखईको महसुस हुन्छ’ डा श्रेष्ठले भने । खाना र पानी नै दूषित हुँदा सुरुमा झाडा पखालादेखि, ग्यास्ट्रिक, अल्सर हुँदै क्यान्सरसम्म हुने गर्छन् ।
शाहिद कपुरकी पत्नी बलिउडमा डेब्यू गर्दै
के तपाईलाई कब्जियतको समस्या छ? यस्ता छन् समाधानका उपायहरु